के अतिथि पोष्टहरू SEOका लागि खराब छन्?
बुधवार, अगस्त 27, 2014 बिहीबार, अगस्ट 28, 2014 Douglas Karr
जब तपाइँ तपाइँको साइट को लागी सामग्री को विकास को लागी देख रहे हैं, महान सामग्री को लागी इच्छा राखी रहन यो सधैं एक चुनौती हो। तपाईंको ब्लगको लागि समय-समयमा अतिथि ब्लगहरू स्वीकार्न प्रलोभनमा पर्न सक्छ।
प्रत्येक दिन र हामी प्रायोजित पोष्टहरूको लागि भुक्तानी गर्न अफरहरू पाउँछौं साथ साथै अतिथि पोष्टहरूको लागि अनुरोधहरू। हामीले धेरै चन्द्रमाहरू पहिले भुक्तान गरिएका पोष्टहरू परीक्षण गर्‍यौं र तुरुन्त रोक्नुभयो - यदि हामीसँग सार्वजनिक रूपमा बाँकी रहेको खण्डमा म छक्क पर्दछु। गुणस्तर सधैं डरलाग्दो थियो, सामग्री हाम्रो श्रोताको लागि कहिल्यै केन्द्रित थिएन, र लक्ष्य लगभग बेच्ने र हाम्रो पाठकहरूलाई कहिले पनि मूल्य प्रदान नगर्ने थियो। अतिथि पोष्टहरू अझै पनी अनुमति छ तर मैले अनुमान गर्नु पर्छ कि एक वा दुई प्रतिशत मात्र प्रकाशित हुन्छन्।
यस बर्षको सुरूमा, गुगलको म्याट कट्सले निम्न चेतावनी प्रदान गर्‍यो:
ठीक छ, म यो कल गर्दैछु: यदि तपाइँ पाहुना ब्लगिंग २०१ 2014 मा लिंकहरू प्राप्त गर्ने तरिकाको रूपमा प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाइँले रोकिनुपर्दछ। किन? किनभने समयको साथ यो अधिक र अधिक स्प्याम्मी अभ्यास भएको छ, र यदि तपाइँ धेरै पाहुना ब्लगि doing गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाइँ वास्तवमै खराब कम्पनीको साथ ह्या hanging आउट गर्दै हुनुहुन्छ। दिन मा, अतिथि ब्लगिंग एक सम्मानजनक चीज को लागी प्रयोग गर्नु जस्तै एक लोभ, सम्मानित लेखक को लागी तपाइँको पुस्तक को परिचय लेख्न को लागी। यो कुनै पनी छैन।
त्यसोभए ... अतिथि ब्लगिंगले तपाईंको सामग्रीको क्वालिटीलाई मात्र हानी पुर्‍याइरहेको छैन, यसले वास्तवमा खोजी ईन्जिनहरूमा तपाईंको साइटको श्रेणीलाई असर गरिरहेको हुन सक्छ!
आज राती, मैले एक वर्ड कागजात प्राप्त गरे जुन हाम्रो ब्लगको लागि विचारको लागि लेखिएको एकदम अनौंठो लेख थियो। मेरो जिज्ञासा थियो किनभने मैले सामान्य रूपमा पोष्ट प्राप्त गर्दैन जब सम्म सार्वजनिक सम्बन्ध पेशेवर वा हामीले लिदै गरेको कम्पनीसँग केही छलफल हुँदैन। मैले पोष्ट पढें र यो वास्तवमै एकदम राम्रो थियो - अनौंठो ईमेल अभियानहरूको उदाहरणहरू प्रदान गर्दै। एक चेकको रूपमा, मैले सुरुको अनुच्छेद प्रतिलिपि गरें र यसलाई Google मा टाँस्नुभयो जुन सामग्री अन्यत्र पोष्ट गरिएको थियो भनेर हेर्नका लागि।
यसको परिणामस्वरूप केही डरलाग्दो भयो। लेख अद्वितीय थियो, तर मूलतः केही वर्ष पहिले लेखिएको लेखको क्लोन जसले धेरै ध्यान दियो। मसँग अपडेट गरिएको नमूनाहरूसँग केहि समान वाक्यांश थियो। यो एक समान प्रतिलिपि थिएन र यसले कोपिसकेप जस्ता उपकरण पनि पास गरेको हुन सक्छ ... तर यो अद्वितीय थिएन। लेखक जो कोही थिए, उनले उदाहरणहरू अपडेट गर्ने र लेख फेर्नु नपरोस् भनेर पर्याप्त लेखमा राम्रो काम गरेका थिए।
हामी निश्चित रूपमा लेख प्रकाशित गर्ने छैनौं। इन्फोग्राफिक्सको बाहेक, हामीले साझा गर्ने प्रत्येक पोष्ट अनौंठो हुन्छ Martech Zone। र इन्फोग्राफिक्स पनि एक अद्वितीय परिचय र तिनीहरूमा मेरो2सेन्टको साथ प्रकाशित हुन्छन्। मान्छेहरू ... अतिथि ब्लग पोष्टहरू स्वीकार गर्न प्रलोभनमा नपर्नुहोस्। तिनीहरू सम्भवतः योजनाहरू हुन् तपाईंको साइटमा केहि लिंकहरू राख्न। यसले सबै ठूलो परिश्रम राख्दछ तपाईले ठूलो जोखिममा पूरा गर्नुभयो। प्रलोभनमा नपर्नुहोस्!
यसको सट्टामा म पोष्टिंगको दिन छोड्ने थिएँ यसमा दशकौं प्रयत्नसहित साइट जोखिममा राख्न!
टैग: Google +अतिथि पदहरूमैट कर्ट्सखोज इन्जिन अनुकूलनएसईओप्रायोजित पोष्टहरू
अगस्ट 28, 2014 मा 2: 38 AM
मिथक भनेको के हो तपाईंले आशा गर्दै हुनुहुन्छ। यो होइन कि अतिथि पोष्टहरू मरेका छन् एक अप्रासंगिक र खराब लिंक लाभहरू मरेका छन् म विश्वास गर्दछु !!
अगस्ट 28, 2014 मा 11: 09 AM
महान पोष्ट डगलस! तपाईले भनेको सबै कुरामा म सहमत छु र भन्नु पर्छ यो राम्रो छ तपाईले पाहुना पोष्टलाई अनुमति दिनुहुन्छ (महान व्यक्तिहरू अवश्य पनि)। मैले धेरै साइटहरू भेट्टाए जसले अतिथि पोष्टिंग स्वीकार नगर्ने निर्णय गरे जुन ठीक छ, तर हुनसक्छ तिनीहरूले केही उत्तम अवसर गुमाउनेछन्।